The World of Moe Thanzin: ကျွန်တော့်ရည်မှန်းချက် တွေးလျှက်နဲ့ မောသည်မောသည်
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 12:14 PM
မမရေ..ကျားယို........။ နောင့် လဲ ပိန်ချင်တယ်...နောင့် က osim ၀ယ်ပြီးသွားပြီ.....ဒါပေမယ့် ပါတ်ထားပြီး အသားတွေတုန်ပြီးရင်လဲ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး...(ဥပမာ ယားတာ..၊ အန်ချင်တာ) ..ဒါပေမယ့် ပိန်လဲ ထူးမပိန်ဘူး ဟိ...၀ယ်ထားတာ2ပါတ်ပဲရှိသေးတာကိုး...အဲ့ဒါ ၀ယ်ပြီးမှ စားတာကလဲ အရင်ထက်2ဆလောက်ရှိမယ်...သူ့ အားကိုးနဲ့ စားတာလေ...။ ကိုယ့်ဘာသာ စားချင် သောက်ချင်စိတ်ကို မထိန်းနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်...ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ မသိဘူး.း))
Pwint Myuu...I recommend you "yoga" exercises, it really makes you healthy, fit and beautiful. You have to be patient though, it will take more than6months for the desired effect.
သူငယ်ချင်း မြန်မြန် ပိန်ပါစေ... မြန်မြန်ဝိတ်ကျပါစေ.. ဝိတ်မကျလဲ ငါ့ကို နင့်အသားတွေပေးလေ... ငါက ၁၀ ကီလိုတော့မလိုတော့ဘူး.. နောက် ၂ ကီလိုခွဲဆို ရပီတဲ့။ ကျန်တဲ့ ၇ ကီလို စုရည်ကိုပေးလိုက်...:D ဒါဆို အားလုံး အိုကေမှာ...:D
ပိန်ချင်တယ် ပိန်ချင်တယ် ၅ကီလိုလောက်လျှော့ချင်တယ်... ဘယ်နားသွားဝယ်ရပါ့မလဲ
စိတ်တော့ ဝင်စားသား။ ၃၈၈ ဆိုတော့ နည်းနည်း
ပိန်တဲ့ လူက ၀ ချင်တယ်....
၀တဲ့ သူ က ပိန် ချင်တယ်...
အဲ့ဒီ့ အတွက် နည်းနည်းမှစိတ်မပူကြနဲ့..
အာယုဘောဇန အဆီကျ အသား ကျစ် ..ပိန်ဆေး..
ဆိုပြီး တီဗွီ မှာ ငယ်ငယ် က ကြော်ညာ ကြည့်ဖူးတာတောင် သွားသတိရတယ်......း )
ပိန်ချင်တာ အရမ်းပဲ...၁ပတ်၁ကြိမ်ရေကူးတာ မထိရောက်ဘူး... ညစာ ထမင်းမစားမှ ထင်တယ်...:D